Qarax xoogan oo habeenimadii xalay siweyn looga maqlay magaalaada Baydhabo – SBC
Qarax xoogan oo habeenimadii xalay siweyn looga maqlay magaalaada Baydhabo
Posted by Webmaster on Juun 7, 2012 Comments
Qaraxan oo ka dhacay bartamaha Magaalada goob ay ku badan yihiin dadka rayidka ah iyadoo wararku ay xaqiijinayaan in qaraxaasi uu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh kaas oo soo gaaray dad rayid ah iyo ciidan ka tirsan DKMG ah oo iyaga lala damacsanaa qaraxa.
Lama sheegin wali khasaaraha rasmi ahaan ka dhashay qaraxaasi maadaama xili habeen ah uu ka dhacay magaalada.
Wasiir ku xigeenka wasaarada Gaashaandhiga DKMG ah C/laahi Cali Catoosh ayaa u sheegay warbaahinta in qaraxaasi ay geysteen xarakada Alshabaab, hase ahaatee ma sheegin khasaaraha dhabta ah ee ciidamada DKMG ah iyo dadka rayidka ahba ka soo gaaray Qaraxaasi.
Dadka rayidka ah ee ku sugan deegaanada ka agdhow halka uu qaraxu ka dhacay ayaa warbaahinta u shegay in ay arkayeen dad isugu jira askar iyo rayid oo goobta qaraxa laga qaaday waasida ay hadalka u dhigeene.
Magaalada Baydhabo xarunta gobolkaasi Baay ayaa waxaa ka dhacayay tan iyo intii ay gudaha u galeen ciidamada DKMG ah ee Soomaaliya kalana wareegeen xarakada Shabaab Almujaahidiin weeraro iyo qaraxyo badi lala eeganayo goobaha ciidamada iyo masuuliyiinta DKMG ah ka degen yihiin magaalada.